2019-08-05 17:50:02 , [Unicode]Please admin LCCI le…
UK exam ​အောင်​မြင်​ဖို့အာမခံပါတယ်​ရှင်​???
အဲ့လို​အတွက်ေ​ကျာင်းစည်းကမ်း​တွေကို​တော့ ​အောက်​မှာဖတ်​​ပေးပါရှင်​ ???
10.8.2019 (Saturday only)
computer basic, ?
လုပ်​ငန်းခွင်​တွင်​ အသုံးပြု​နေ​သော စာရွက်​စာတမ်းများ??
-customer service Trainning,?
Present များ​ပေးပါတယ်​ ?
​ကျောင်းမှာ test 3ကြိမ်​ ​ဖြေဆိုရပါတယ်​ 3ကြိမ်​မှာ အမှတ်​အများဆုံးရရှိသူများ ​ကျောင်းတက်​မှန်​သူများကို အမှတ်​တရ ဒိုင်းဆုများနှင့်​ ချီးမြှင့်​​ပေးမှာလဲ ဖြစ်​ပါတယ်​ ??
UK exam ​အောင်ျမင်​ဖို့အာမခံပါတယ်​ရွင်​???
အဲ့လို​အတြက်ေ​က်ာင်းစည်းကမ်း​တြေကို​တော့ ​အောက်​မွာဖတ်​​ပေးပါရွင်​ ???
လုပ်​ငန်းခြင်​တြင်​ အသုံျးပု​နေ​သော စာရြက်​စာတမ်းမ်ား??
Present မ်ား​ပေးပါတယ်​ ?
​ကေ်ာင်းမွာ test 3ကြိမ်ျေဖဆိုရပါတယ်​ 3ကြိမ်​မွာ အမွတ်​အမ်ားဆုံးရရွိသူမ်ား ​ကေ်ာင်းတက်​မွန်​သူမ်ားကို အမွတ်​တရ ဒိုင်းဆုမ်ားနွင့်​ ခ်ီျးမှင့်​​ပေးမွာလျဲဖစ်​ပါတယ်​ ??
This entry was posted in Training and Class on 2019-08-05 by admin.
← 2019-08-05 17:49:54 , [Unicode]Please admin LCCI le… 2019-08-07 08:37:51 , Please admin LCCI level1+2 (F… →